GTT International - Genève: Fanambaràna sy antso avo avy amin-dRamatoa Lalao Ravalomanana
Fanambaràna sy antso avo avy amin-dRamatoa Lalao Ravalomanana
Araka ny tenin'ny soratra Masina manao hoe: "Miraisa saina ianareo rehetra, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrà fo, manetre tena".
Ankehitriny, fon-dReny no miteny: Amin'ny fo feno fahendrena sy fanetre-tena no hanaovako antso avo amin'ny Fitondram-panjakana, fiangonana, fikambanana isan-karazany, fianakaviam-be iraisam-pirenena, ary indrindra ny vahoaka Malagasy rehetra tsy misy ankanavaka.
Fotoana izao hirosoana amin'ny Fifanantonana, fifampiresahana, fifanajana amin'ny Malagasy samy Malagasy. Fotoana ihany koa, hirosoana amin'ny Fampihavanam-pirenena.
Isika Malagasy rehetra dia samy manaja ny soatoavina Malagasy, dia ny Fihavanana izany. Ary mametraka ny tombotsoam-pirenena mialohan'ny zava-drehetra.
Tokana ny fahavalon'ny Malagasy, dia ny fahantrana izany. Ka hifanome tanana isika, ka hiaraka tahaka ny mpirahalahy, na amin'iza na amin'iza, amin'izay rehetra mino ny Fihavanana Malagasy, ary hitondra fampandrosoana amin'ny tanintsika sy Firenentsika.